केन्द्रको बदला प्रदेशबाट लिँदै उपेन्द्र यादव , महन्त-राजेन्द्रका १० सांसद आफूतिर तान्दै ! - Dainik Online Dainik Online
केन्द्रको बदला प्रदेशबाट लिँदै उपेन्द्र यादव , महन्त-राजेन्द्रका १० सांसद आफूतिर तान्दै !
प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने सन्दर्भमा जसपाका बहुमत संसदहरुले महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई साथ दिए पछि उपेन्द्र यादवलाई गम्भीर धक्का लागेको थियो । उपेन्द्र यादव पक्षका पाँच जना सांसद विमल श्री वास्तव, उमाशङ्कर अरगरैया, रेणुका गुरुङ, रुही नाथ र कल्लुदेवी विश्वकर्मा ठाकुर–महतो कित्तामा पुगेका थिए । त्यसको बदला यादवले १० जना सांसद आफूतिर तानेर प्रदेश बाट लिदैछन ।
सरकार बनाउन प्रदेश नम्बर २ मा जम्मा ५३ सांसद आवश्यक पर्दछ । जहाँ काङ्रेसका २० जना र माओवादीका ८ जना सांसद रहेका छन् । काङ्ग्रेस एक्लैले समर्थन गर्दा पनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पक्षमा महन्त पक्ष बिना नै बहुमत पुग्छ । तर , काङ्ग्रेस र माओवादीलाई समेटेर मन्त्री मण्डल बिस्तार गर्न उपेन्द्र र राउत लागेका छन् ।
प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभामा हाल १०४ जना सांसद छन् । जसमा जसपाका मात्रै ५५ जना छन् । ५५ सांसदहरूमा पार्टी एकता गर्दा उपेन्द्रका ३० जना र महन्त ठाकुरका २५ जना सांसद थिए । सोमबार ठाकुर पक्षको संसदीय दल बैठकमा १५ जना मात्र सांसद उपस्थित हुन पुगे । त्यसमा ५ जना खुलेर उपेन्द्र पक्षमा लागि सकेका छन् भने अन्यलाई पनि आफूतिर ल्याउन उपेन्द्र आँपै कस्सिएर लागेका छन् ।